Nleta Onyinye PVlọ oriri na ọ PVụ PVụ PVC Nlekọta 6x12m Na Firelọ Mgbapụta Ọkụ na Ulo Ewu na Greenhouse | Winsom
6x12m Udiri PVC Ememe Ememe Ngwunye Withlọ Akwụkwọ Ọkụ Na-akwụghachi Ọkụ
4-19 Ibe 20-49 Ibe > = 50
Tentlọ oriri na ọ idealụ partyụ a dị mma maka emume ọ bụla dị n'èzí, dịka ihe ngosi, agbamakwụkwọ, oriri na oriri. Nwekwara ike wụnye ya n'azụ ụlọ gị ka ọ bụrụ nnukwu anwụ na-acha anwụ anwụ iji lekọta ndị ezinụlọ gị na ndị ọbịa gị.
1) Ọkụ mkpuchi nke mgbidi na mgbidi na-ezute Flame Retardant Standard M2
2) Ogo dị elu, usoro ọrụ dị arọ, yana njikọta na-adịgide adịgide na ntọala ọla
3) Igwe mkpuchi elu nke PVC nwere seams kpuchie ya, mmiri mmiri 100%
Nọmba Model WS-P2612
Aha ihe 6x12m Udiri PVC Ememe Ememe Ngwunye withlọ Ubi na Fire Retardant
Ogo Ahịa 20x40ft (6x12m)
Ihe mkpuchi PVC 500gsm
Akụkụ akụkụ akụkụ 380gsm Fire Retardant PVC
Frame spec. Dia 42 * 1.2 / 38 * 1.0mm galvanized steel tubes
Ibu ibu 266 KG
MOQ Iberibe 4
20x40ft (6x12m) Ọbịaru Ọkachamara
Partylọ oriri na ọ partyụ partyụ anyị nwere ụdị ụkwụ ụkwụ kwụ ọtọ na akwa ụlọ katidral na-enye obi ụtọ maka ọtụtụ ebe dị n'èzí. Nnukwu oriri maka oriri agbamakwụkwọ, ihe omume ụlọ ọrụ, oriri na ọdoorụ andụ na ndị ọzọ!
Anyị na-anakwere nnukwu ọkwa galvanized nke nwere ike igbochi tubes na corrosion na rust.Adabere na akụkụ nkwado beam na-emepụta usoro triangle pụrụ iche, na-eme ka okpokoro ụlọ dị n'elu kwụsie ike karị & kwụsiri ike; na ụdọ ala ndị ọzọ na-eme ka ụlọikwuu ahụ guzosie ike karị ma nwekwuo ike iguzogide ikuku.
Okomoko emere PVC n’elu ya na akụkụ ya nwere ike izute Flame Retardant Standard M2. Ihe mkpuchi mmiri 100%, nchebe UV iji nye ikuku dị mma maka ihe omume gị. Ọzọkwa, ọ nwere ụzọ mbughari, zipurered na windo 12 PVC iji mee ka ikuku na ọkụ bata.
N’elu ụlọikwuu ahụ a na-eme ememme, anyị na-eji osisi ndị a kwalitere aka iji zere ọdịda nke akwa mmiri PVC nke ụkọ mmiri kpatara. Ọzọkwa, usoro a na-eme ka ọ dịkwuo mma nwere ike ichebe ụlọikwuu ahụ nke ikuku ma mee ka ọ kwụsie ike na nchekwa.
Osisi ndị tozuru etozu, ajị ajị anụ na -eme ka ihe dị mma: usoro nchara kachasị mma na nkwonkwo nkuku metal na-eme ka kanopi anyị dịgide adịgide.
Enwere ike ịkwaga akụkụ ndị dị n'akụkụ na ọnụ ụzọ n'ụzọ dị mfe. Enwere bọọlụ na-amapụ na njikọta maka ịgbakwunye nkwụsi ike nke etiti ahụ, a na-ejikọ elu ụlọ na akụkụ ahụ na etiti ahụ site na bọọlụ ọcha.
Nke gara aga: Dị ọnụ ala × 3 Event 3 Ihe omume Tlọ Mpụga
Osote: 10x20Ft (3x6M) PVC Party tent dị egwu
Partylọikwuu Party Ndị Dị ọnụ ala
Partylọ Mpụga Ọpụpụ
Dị ọnụ ala × 3 Event 3 Ihe omume Tlọ Mpụga
10x20Ft (3x6M) PVC Party tent dị egwu
Nnukwu entslọ Mpụga n’èzí Maka Ihe Ndị Mere Eme 5x8m
Szụ Partylọ oriri na ọ Cheapụ Cheapụ dị ọnụ ala otu tent 13x20ft (4x6m)
N'èzí ellingzụta entslọ Akwụkwọ Na-ekpo ọkụ Maka Mmemme Party
Oghere Ntinye PVC Party 4x4m